Afrika : Valisoa sy Hadisoam-panantenana Amin’ny CAN2012 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2012 13:16 GMT
Lavitr'ireo fisamantsamahana ara-poko, politika sy isam-paritra, angonin'ny baolina kitra hanodidina ny ekipam-pirenena iray ny olona . Tsinjo ny vadin'ny filohan'i Gabon , nandihy toy ny mpianatra eny amin'ny kolejy, isaky ny misy baolina matin'ireo mpilalao iraika ambinifolo avy any amin'ny fireneny ao amin'ny “l'Azingo Nationale” izay lasa ho “Les Panthères” . Nahasafononoky ny hafaliana ny vahoaka izay efa miforitra ambany jadona isan'ny henjana indrindra ny nahatafita ny tarika équato-guinéens. Araka ny ambaran'ny Human Rights Watch, dia misy mpanao gazety tonga any amin'io firenena io mba hanadihady momba ny resaka zon'olombelona no nosamborina, nalaina am-bavany, tratry ny sivana ary noroahana.
Ny bilaogin'i Michel Doedje dia manazava amintsika ny toe-draharaha mampiavaka manokana ity andiany iray ity :
Fampahatsiahivana ao amin'ny le229.com, fa tao anatin'ny tantaran'ity fifaninanana ity, dia nahavory amboara CAN dimy ambinifolo ireo tarika 5 ireo tamin'ireo andiany 27 teo aloha, Nicholas Mc Anally no manome ny valinteniny :
Lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny bilaogy “plat du pied” no nanazava tamin'ny 15 novambra 2011 hoe :
Any Maraoka, momba ny “Lions de l’Atlas” lahatsoratra iray navoakan'ny bilaogy marocfootball.info no manao hoe :
I Cote d’Ivoire, izay vao avy nivoaka sempotra taminà ady an-trano sy faharavana mahatsiravina, dia handrotsaka 5 miliara CFA (1 tapitrisa dollars) ho an'ireo Elefantany araka ny ambaran'ny bilaogy afrik11.com raha toa tonga any amin'ny famaranana :
Any Mali, ny valisoa dia narotsaka tamin'ireo “Aigles du Mali” araka ny ambaran'ny bilaogy afrik11.com, tany ampiandohan'ny volana Janoary :
Ho an'ny fandresena voalohany azon-dry zareo, ireo mpikambana ao anatin'ny “Éclair national” (Nzalang Nacional na ihany koa Veve Nacional) avy any Guinée équatoriale, mpiara-mikarakara ny fifaninanana, tsy nahavita akory nanorina kianja afaka andraisana lalao iray taorian'ireo orana matetitetika, izay efa fantatra tsara any amin'ny faritra rahateo, ny bilaogy abidjan.net dia nampakatra lahatsoratra iray ahitàna toy izao mivaky ao anatiny :
Eo ankilan'io fahalalahan-tànana adika ho pétrodollars io, ny vahaolana noraisina any amin'ny ilany iray amin'i Guinée izay mandray anjara amin'ity fetiben'ny baolina kitra ity dia tahaka ny vahaolan'ny mahantra ihany. Any Conakry, ny ahiahy voalohany dia ny hahitàna vola hatao valisoa. Ny vohikala lejourguinee.com dia nampahafantatra fa napetraka ny Komitim-pirenena iray ho fanohanana an'i Sily, ka eo amin'ny fitarihana azy dia ny Jeneraly Mathurin Bangoura, minisitry ny trano fonenana sy ny fanajariana ny tanan-dehibe, ho an'ny fanangonam-bola. Anisan'ireo voalohany tamin'ny fitondrana anjara biriky, dia nisy, indrindra indrindra, ny vondrom-piarahamonina indiana mipetraka ao amin'ny firenena.
Ny vola izay tsy ho lanilany foana dia tsy isalasalana fa ny valisoa arotsaka ho an'ireo “Lions de la Teranga”, izay tafiditra tany amin'ny dingana famaranan'ny CAN2012 toy ny andrarezina sady voalohany nangorona ny entany. Na izany aza, ny bilaogy can.starafrica.com, dia nampahafantatra talohan'ny niantombohan'ny fifaninanana hoe :